November 11, 2021 - Babal Khabar
Nov112021 by बबाल खबरNo Comments
के क्ष’यरो’गका बि’रा’मीले यौ,न सम्पर्क राख्न सुरक्षित हुन्छ ?
यो भिडियो हेर्नुस, यौ,नका सम्बन्धमा विभिन्न स'मस्या लिएर बिरा'मीहरू आउनु स्वाभाविक हो। उमेर समूह अनुसार मानिसहरू विभिन्न जिज्ञासाका साथै समस्या लिएर आइपुग्छन्। टिनेजरहरू विशेष गरी आफ्नो शरीरमा देखिएका परिवर्तनबारे जान्न खोज्छन्। टिनेजर केटाहरू प्रायः ह,स्त'मैथु'नका बारेमा जान्न खोज्छन्। दिनमा कतिपटकसम्म ह,स्तमै,थुन गर्नु राम्रो हो, यो ‘एडि'क्सन’ हो कि होइन भन्नेजस्ता खुल्दुली हुन्छन्। लिं,ग बां'गो हुनु कुनै सम'स्या हो कि होइन भनेर सल्लाह लिन आइपुग्छन्। केटीहरू विशेषगरी महि,नावा'रीको सम'स्या लिएर आइपुग्छन्। महि,नावारी हुँदा किन पे'ट दु'ख्छ', महिनावा'रीमा किन गड'बडी हुन्छ भन्नेजस्ता समस्या हुन्छन् उनीहरूसँग। कोही कोही त महिलामै मात्र किन महि,नावा'री हुन्छ भन्ने जिज्ञा'सा पनि राख्छन्। ग'र्भका सम्बन्धमा उनीहरू जान्न चाहन्छन्। महि,नावा'री चक्रको कुन समयमा ग,र्भ बस्छ बस्दैन भनेर उनी
यौ’न सम्पर्कबाट फैलिने ख’तरनाक चार ब्याक्टेरिया !
भिडियो हेर्नुस, हाल विश्वभर यौ’न सं'क्रमण से'क्सुअल ट्रान्समिटेड इन्फे'क्सन (एस'टीआई) तीव्र गतिमा फैलिरहेको छ । यसले विश्वलाई नै आतं’कित बनाइरहेको छ । सं’क्रमणका प्रमुख कारक चार ब्याक्टेरियाको बारेमा यहाँ बताइन्छ जसले मानिसको स्वास्थ्यमा ठूलो हानि पुर्याउन सक्छन् । नाइसे'रिया मेनि'न्जा'इटिस नाइ'सेरिया मेनि'न्जाइटिसलाई मेनिन्गो'कस पनि भनिन्छ । यो ब्या'क्टेरिया दिमाग र ढा'डको ह'ड्डीमा फैलिन्छ । तर, यो जनने'न्द्रियमा तीव्र गतिमा फैलिन्छ । ७० को दशकमा चिम्पान्जीको नाक र घाँटीबाट यो ब्याक्टेरिया त्यसको मूत्र'द्वा'रसम्म फैलियो र यसबाट चिम्पान्जी संक्र'मित भएको एक अध्ययनले देखाएको छ ।करीब ५ देखि १० प्रतिशत युवामा नाइसेरिया मे'निन्जाइटिस ब्याक्टे'रिया घाँ'टी अथवा नाकको माध्यमले फैलिन्छ । एक अध्ययनका अनुसार यो संक्र’मण एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा मु’खमै’थुन अथवा अन्य तरिकाको सम्प'र
भिडियो हेर्नुस, स'म्बन्ध बिगा'र्ने यस्ता समाचार प्रायः सुन्न र देख्न पाइन्छ । आजको जमानामा सम्ब'न्धको कुनै महत्व छैन । मानिसको नियत बि'ग्रदै गएको छ र साथमा सम्बन्ध पनि बि'ग्रदै गएको छ । घर भित्र होश या बाहिर मानिसले यस्तो काम गर्छन् कि पवित्र स'म्बन्ध माटोमा मिल्छ। यस्तै एउटा घटना भारतको उत्तर प्रदेशबाट बाहिर आएको छ जहाँ ससुराले बुहारीसँग बिहे गरे र खबर बाहिर आएपछि अहिले सबै हैरान भएका छन् । उत्तर प्रदेशमा ससुरा र बुहारी प्रेममा परे र उनीहरुले बिहे गरे । यसबीचमा न ससुरालाई छोराको चि'न्ता थियो न श्रीम'तीलाई श्रीमानको चिन्ता । हिजोसम्म श्रीमान्–श्रीमती रहेका युवक–युवतीबीच अहिले आमा छोराको सम्ब'न्ध बनेको छ । त्यसैगरी हिजोसम्म ससुरा र बुहारीको सम्ब'न्धमा रहेका महिला–पुरुष अहिले पति–पत्नी बनेका छन् । एक बाबुले छोरालाई धो'का दिएर आफ्नी बुहारीसँग बिहे गरे र श्रीमतीले श्रीमिनलाई धोका द
यस्तो छ, अधिकां’श पु’रुषले क’ण्डम प्र’योग नगर्नुको का’रण’”
हेर्नुस यो भिडियो, विश्वभर जनसंख्या तथा यौ’न रोग नियन्त्रणमा क'ण्डमले निकै महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ ।तर धेरैजसो बेलायती नागरिकले क ण्डम प्रयोग नगर्ने तथ्य बाहिर आएको छ । बेलायती नागरिकले क 'ण्ड'म कम प्रयोग गर्नुको कारण भने अनौठो छ । ***थप जानकारीको लागी यहाँ तल डबल क्लिक गर्नुहोस*****, मानिसले क 'ण्डम प्रयोग नगर्ने मुख्य कारणमा कण्डम प्रयोग गर्दा यौ' 'न स न्तुष्टि घट्ने वा अप्ठ्या'रो हुने यसअघिका अध्ययनबाट पुष्टि भएको थियो । तर बेलायतमा क' 'ण्डम प्रयोग घट्दै जानुको अर्कै कारण रहेको छ । औसत लि 'ङ्गको आ कारभन्दा बजारमा पाइने क 'ण्डमको आ'कार ठूलो भएका का रण प्र'योग घ 'ट्दै गएको अ ध्ययनले देखाएको छ ।थप भिडियो हेर्न यहाँ तल डबल क्लिक गर्नुहोस* यो पनि : कसरी के गर्दा महिलाहरु, खुशी हुन्छन जानी राखौ… भनिन्छ महिलालाई बुझ्न मुस्किल छ । उनीहरु कहिले खुसी हुन्छन् कहीले दुखी हुन्छन् त्यो